ကာရစ်၏ ဒဏ်ရာက ယူနိုက်တက် အတွက် ထိုးနှက်ချက် တစ်ရပ် ဖြစ်လာ
မိုက်ကယ်ကာရစ် ဒဏ်ရာရသွားခြင်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အတွက် ထိုးနှက်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ အသက်(၃၃)နှစ်ရှိ အင်္ဂလန် ဝါရင့် ကစ...
မေလ ၇ ရက်နေ့ ထုတ် Ain Arr Journal Vol 27 No3http://www.mediafire.com/download/vl552w34y3drris/vol27no3.pdf မေလ ၈ ရက်နေ့ ထုတ် Sp...
ယနေ့ ဘောလုံးပွဲ ခန့်မှန်းချက်များ
ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည်ကြာ အနားယူနေရသည့် ဗာမေလန် ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ရန် နီးစပ်နေ
ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည်ကြာ အနားယူနေရသည့် ဗာမေလန် ဘောလုံးပြန်ကစားနိုင်ရန် နီးစပ်နေ တံကောက်ကြော ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည်ကြာ အနားယူနေရသည့် ဘာစီလ...
အကြိုက်တူတဲ့ ပွဲများကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှ လုပ်ကြပါ။ ကျွန်တော် ဘောလုံးပွဲမလောင်းပါ။ တင်ပေးပါဟု တောင်းဆိုသဖြင့် တင်ပေးခြင်ြး...
ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမြူအနိုင်ရရှိ
ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမြူအနိုင်ရရှိ အောင်ငြိမ်းသွေး ဇူလိုင် ၁၉၊ စပိန်။ ။ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့က ကျ...
ဟောင်ကောင် ယူ၂၃ အသင်းကို တစ်ယောက်လျော့ဖြင့် မြန်မာ ယူ၂၃ အသင်း ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ယူ
ဟောင်ကောင် ယူ၂၃ အသင်းကို တစ်ယောက်လျော့ဖြင့် မြန်မာ ယူ၂၃ အသင်း ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ယူ ================================================ တရု...
ဘရာဇီးလ် ဂန္ထဝင် ကစားသမား ရိုနယ်ဒင်ဟို ဘောလုံးကစားသမား ဘဝမှ အနားယူတော့မည်
ဘရာဇီးလ် ဂန္ထဝင် ကစားသမား ရိုနယ်ဒင်ဟို ဘောလုံးကစားသမား ဘဝမှ အနားယူတော့မည် သတင်းများရဲ့ အဆို အရ ဘရာဇီးလ် ကစားသမားဟောင်း သည် ရာသီ အကုန် တ...
ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် မြန်မာယူ-၂၁အသင်းကို ယူ-၂၀နှင့် ယူ-၂၃ကစားသမားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းမည်
ဗီယက်နမ်ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် မြန်မာယူ-၂၁အသင်းကို ယူ-၂၀နှင့် ယူ-၂၃ကစားသမားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းမည် ရဲရင့်ဋ္ဌေး ဇူလိုင် ၁၄၊ ရန်ကုန်။ ။ ဗီ...
ဇူလိုင် ၁၉၊ စပိန်။ ။ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌသစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမြူက ပြိုင်ဘက်ဥက္ကဋ္ဌလောင်း သုံးဦးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အနိုင်ရသွားခဲ့သည်။
ဘာစီလိုနာအသင်းဥက္ကဋ္ဌမှ စတင်ပြီး ကစားသမားများအပါအ၀င် အသင်း၏အဖွဲ့ဝင်များက မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ရာတွင် ဘာတိုမြူသည် ၅၄ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနိုင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘာတိုမြူ၏အဓိကပြိုင်ဖက် ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း လာပေါ်တာမှာ ၃၃ ဒသမ ၀၃ ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ပြီး ကျန်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဘန်ဒီတိုမှာ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်နှင့် ဖရီဇာမှာ ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာ ရရှိခဲ့ကြသည်။
ဘာတိုမြူသည် နေမာ၏အပြောင်းအရွှေ့ပြဿနာများကြောင့် အသင်းမှ နုတ်ထွက်သွားခဲ့သော ဥက္ကဋ္ဌဆန်ဒရို ရိုဆဲလ်၏နေရာတွင် ဆက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လက်ထက်တွင် တစ်နှစ်အတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား၊ လာလီဂါဖလားနှင့် ကိုပါဒယ်ရေးဖလားတို့ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်တွင် နည်းပြ လူးဝစ္စအင်းနရစ်၊ ကွင်းလယ်လူ ဘက်စ်ကွက်၊ ပက်ဒရို၊ ဂျော်ဒီအယ်လ်ဘာတို့ကို သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ဆီဗီလာကွင်းလယ်လူ အလက်ဆစ်ဗီဒယ်နှင့် အက်သလက်ကွင်းလယ်လူ အာဒါတူရန်တို့အား ခေါ်ယူခြင်းများကို လက်ကျန်ဥက္ကဋ္ဌသက်တမ်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
လာပေါ်တာမှာ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာပါက ဂျူဗင်တပ်စ်ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာကို ခေါ်ယူပေးမည်ဆိုသည့် မက်လုံးဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဘာတိုမြူသည် ဘာစီလိုနာအသင်းကို ခြောက်နှစ် ထပ်မံဦးဆောင်ခွင့် ရရှိသွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဟံသာဝတီအသင်း ၁၂ ပွဲဆက်နိုင် ပွဲပျောက်ဆုံးနေသည့် မှတ်တမ်းဆိုးရရှိ
ဇူလိုင် ၁၈၊ ရန်ကုန်။ ။ ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းသည် ယခုနှစ်မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ် ၁၂ အပြီးတွင်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေသည့်အတွက် ၁၂ ပွဲဆက်အနိုင်မရသည့် မှတ်တမ်းဆိုးရရှိခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ ၁၂ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ဆုံးနေသည့် အခြေအနေမှာအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး အသင်း၏လက်ရှိအခြေအနေမှာလည်း တန်းဆင်းဇုန်အတွင်းသို့ရောက်ရှိနေသည်။
“အသင်းမှာအဓိကအားနည်းနေတာက အဆုံးသတ်ပိုင်းပါ။ ပွဲတိုင်းမှာအနိုင်ရသင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပေမယ့် အဆုံးသတ်ပိုင်းအားနည်းချက်ကြောင့်ရမှတ်တွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ ဒီအားနည်းချက်ကို ပြင်ဆင်နေပေမယ့်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိမအောင်မြင်သေးပါဘူး”ဟု ဟံသာဝတီယူနိုက်တက် နည်းပြချုပ် ဦးငွေထွန်းကပြောသည်။
ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းသည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲ ပွဲစဉ်-၁၂အပြီးတွင် နိုင်ပွဲမရှိပဲ ခုနှစ်ပွဲသရေ၊ ငါးပွဲရှုံး၊ ရမှတ် ခုနှစ်မှတ်ဖြင့် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် ၁၁နေရာတွင် ရပ်တည်နေသည်။
ဗီယက်နမ် ယူ-၂၀ အမျိုးသမီးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရန် မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိတ်ကြားထား
ဇူလိုင် ၁၈၊ ရန်ကုန်။ ။ ဗီယက်နမ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် ဗီယက်နမ် ယူ-၂၀ အမျိုးသမီး ဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်သို့ တရားဝင်ဖိတ်ကြားထားသည် ဟု မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဒု-ဥက္ကဌ ဦးတင်အောင်က ပြောသည်။ အဆိုပါဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အာရှနှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံမှ အသင်းများ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
“ ဗီယက်နမ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဘက်ကနေ အမျိုးသမီး ယူ-၂၀ ပွဲအတွက်ရော အမျိုးသား ယူ-၂၁ ပွဲရော ဖိတ်ထားပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ လုပ်နေကြ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲလေးပါ။ ဒီဘက်က သွားပြိုင်ဖို့ကိုတော့ တရားဝင် အကြောင်းမပြန်ရသေးပါဘူး။ ယူ-၂၀ ဆိုတော့ သွားပြိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီး ယူ-၁၉ အသင်း ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အမျိုးသား ယူ-၂၁ အသင်းကတော့ သွားပြိုင်ဖြစ်မှာပါ။ တရားဝင်လည်း အကြောင်းပြန်ထားပါတယ် ” ဟု ဦးတင်အောင်က ပြောသည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ယူ-၁၉ အသင်းကို လက်ရှိတွင် နည်းပြချုပ်အဖြစ် ဦးဝင်းမြင့်သွင်၊ လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် ဒေါ်ဇင်မာဝမ်းတို့က တာဝန်ယူကိုင်တွယ်လျက်ရှိပြီး ဧပြီလမှ စတင်ကာ ကစားသမား ၂၅ ဦးဖြင့် သုဝဏ္ဏလေ့ကျင့်ရေးကွင်း၌ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
နောက်ခံလူ ဘယ်လာရင်ကို အာဆင်နယ်အသင်း ကာလရှည် စာချုပ် ချုပ်ဆို
ဇူလိုင် ၁၈၊ လန်ဒန်။ ။ အသက် ၂၀ အရွယ်သာရှိသေးသည့် လူငယ်နောက်ခံကစားသမား ဘယ်လာရင်ကို ကာလရှည်စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အာဆင်နယ်အသင်းက အတည်ပြု ကြေညာလိုက်သည်။
စပိန်လူငယ်နောက်ခံကစားသမား ဘယ်လာရင်သည် ပြီးခဲ့သည့် ရာသီက အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြ ကစားနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၈ ပွဲ ပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ကာ နှစ်ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နောက်ခံကစားသမား ဒီဘူချီဒဏ်ရာရရှိသွားပြီးနောက် အခွင့်အရေးရလာခဲ့သည့် ဘယ်လာရင်သည် ညာနောက်ခံကစားသမားနေရာတွင် နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင် ကစားနိုင်ခဲ့သည်။
ဘယ်လာရင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဘာစီလိုနာအသင်းမှ အာဆင်နယ်သို့ ရောက်ရှိလာသူ ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်အသင်း၏ အကယ်ဒမီနှင့် လူငယ်အသင်းများတွင်ကစားခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီတွင် ၀က်ဖို့ဒ်အသင်းသို့ အငှားသွားရောက်ကစားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီတွင် အာဆင်နယ်အသင်း၌ နေရာရလာခဲ့ပြီး အက်ဖ်အေဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
ဘယ်လာရင်ကို ကာလရှည်စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း အာဆင်နယ်အသင်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် တရားဝင်တွစ်တာစာမျက်နှာ၌ ဖော်ပြထားသည်။
ဘယ်လာရင်သည် ယခုရာသီတွင် ဒီဘူချီ၊ ကလန်ချမ်ဘာတို့နှင့် ပထမကစားသမားနေရာကို လုရမည်ဖြစ်သည်။
ချယ်လ်ဆီးကိုယှဉ်ပြိုင်ရန် အာဆင်နယ်အသင်းကစားသမားလေးဦးထပ်ခေါ်ရန်လိုဟု အွန်နရီပြော
ဇူလိုင် ၁၈၊ လန်ဒန်။ ။ အာဆင်နယ်အသင်းအနေဖြင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုအတွက် ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက ကစားသမားသစ်လေးဦး ထပ်ခေါ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု သီယာရီအွန်နရီက ပြောဆိုလိုက်သည်။
အာဆင်နယ်အသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်ဘောလုံးရာသီနှောင်းပိုင်းတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်း ချန်ပီယံချယ်လ်ဆီးအသင်း အောက် ၁၂ မှတ်လျော့နည်းကာ ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် ၃ နေရာဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။
နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါးသည် နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလအတွင်း ပထမဆုံးကစားသမားခေါ်ယူမှုအဖြစ် ချယ်လ်ဆီးဂိုးသမား ပီတာချက်ကို ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်သော်လည်း အွန်နရီကမူ ချန်ပီယံဆုရယူရန် ကစားသမားသစ်များထပ်မံလိုအပ်နေသေးကြောင်း ပြောသည်။
"ဒီအသင်းက စိတ်ဓါတ်ကောင်းတဲ့အသင်း၊ ကစားသမားကောင်းတွေရှိတဲ့အသင်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ချယ်လ်ဆီးကိုယှဉ်ဖို့က ကစားသမားသစ် လေးယောက်လောက်ထပ်လိုပါသေးတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြပါမယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကို ရောက်စက ခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဆိုရင် အရန်ခုံမှာ တခါတရံ ဒင်းနစ်ဘားကမ့် ဒါမှမဟုတ် ကနူး၊ ဝီးတော့ဒ်၊ ဒေဗာဆူကာတို့ ရှိနေတတ်တယ်။ ပွဲအတွင်းမှာ ကျွန်တော့်အတွက် အချိန်တစ်နာရီပဲရမယ်ဆိုတာသိတယ်"ဟု အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အွန်နရီကပြောသည်။
အာဆင်နယ်အသင်းအနေဖြင့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်တိုက်စစ်မှူး ဘင်ဇီမာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည် ကြိုးပမ်းနေသည်ဆိုသည့်သတင်းကို နည်းပြ အာစင်ဝင်းဂါး ကလည်း ငြင်းဆန်ထားခြင်းမရှိချိန်တွင် အွန်နရီက နောက်ထပ်တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်ခေါ်ယူခြင်းမှာ အရေးပါသည်ဟု ထောက်ခံခဲ့သည်။
"ဂီရော့ဒ်တစ်ဦးတည်းသာ တိုက်စစ်မှူးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး သူဂိုးမသွင်းတဲ့အခါ အခက်ကြုံရတယ်လို့ သူတို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဝဲလ်ကော့က အဖြေဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ လူတစ်ချို့က ဝင်းဂါးအပေါ်မေးခွန်းထုတ်နေကြတုန်းပဲဖြစ်ပေမယ့် သူဟာ မှန်ကန်တဲ့ရပ်တည်မှုနဲ့သွားနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်နေတုန်းပါပဲ"ဟု အွန်နရီက အဆုံးသတ်ပြောဆိုသည်။
ယိုကိုဟားမား အကယ်ဒမီ တက်ရောက်လိုသည့် လူငယ်များကို ရန်ကုန်အသင်း ကူညီမည်
ဂျပန်နိုင်ငံ ယိုကိုဟားမား လူငယ်ဘောလုံး အကယ်ဒမီသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြား လိုသည့် လူငယ် များကို ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းမှ ကူညီချိတ်ဆက်ပေးသွားမည်ဟု ရန်ကုန်အသင်း အထွေထွေ မန်နေဂျာ ဦးကျော်လင်းထွေးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ဂျေ-လိဂ်ကလပ် ယိုကိုဟားမားအက်ဖ်မာရီနာအသင်းနှင့် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနစ်၊ စက်တင်ဘာက မိတ်ဖက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး လူငယ်ကစားသမားများနှင့် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။
“ လာမယ့် ၂၅ ရက်နေ့မှာ ယိုကိုဟားမားအသင်းက နည်းပြအဖွဲ့တွေ အသင်းကို လာပြီးတော့ ဘောလုံးသင်တန်းကျောင်းက သင်တန်းသားတွေကို နည်းစနစ်ပိုင်းတွေ သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ ပြီးရင်တော့ သူတို့ဆီမှာ သင်ကြားပေးတဲ့အပိုင်းတွေကို မီဒီယာခန်းမှာ ထပ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။
“တကယ်လို့ ဒီက လူငယ်တွေအနေနဲ့ ယိုကိုဟားမား အကယ်ဒမီမှာ သင်တန်းတက်ချင်တယ် ဆိုရင် အသင်းအနေနဲ့ ကူညီချိတ် ဆက်ပေးပါမယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ကျခံရမှာပါ။ YMG ဆိုတဲ့ နည်းပြသင်တန်းတစ်ခုလည်း ပါလာပြီးဖြစ်ပြီး လူငယ်နည်းပြတွေအနေနဲ့ သွားတက်ချင် ရင် ကူညီပေးသွားမှာပါ” ဟု ဦးကျော်လင်းထွေးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ သက်တမ်းအလိုက် လူငယ်အခပေး ဘောလုံးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည့်အပြင် အကယ်ဒမီအသင်း ဖွဲ့စည်းကာ လူငယ် ကစားသမားများကို မွေးမြူလေ့ကျင့်ပေး လျက်ရှိ သည်။
နာပိုလီသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် အင်မိုဘိုင်း ဆန္ဒရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏အေးဂျင့် ပြောကြား
နွေရာသီတွင် ဆီဗီလာထက် နာပိုလီသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆီရိုအင်မိုဘိုင်း ရည်ရွယ်ထားခဲ့ကြောင်း ၎င်း၏အေးဂျင့်ဖြစ်သူက ပြောကြားလိုက်သည်။
အဆိုပါ တိုက်စစ်မှူးသည် ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပွဲထွက်ရာသီတွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ခြေစွမ်းကြောင့် ဘိုရပ်ရှားဒေါ့မွန်မှ စပိန်ကလပ်သို့ အငှားဖြင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် အင်မိုဘိုင်း၏ အေးဂျင့်ဖြစ်သူက ကစားသမား အနေဖြင့် နာပိုလီသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သော်လည်း အီတလီကလပ်က စိတ်ဝင်စားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
“ဆီရိုက နာပိုလီအတွက် ကစားဖို့ ဆန္ဒရှိခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတွေက အကြောင်းပြန်မလာခဲ့ပါဘူး” ဟု အေးဂျင့်ဖြစ်သူ မာကိုဆွမ်မယ်လာက ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ဆီဗီလာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည် အင်မိုဘိုင်း၏ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပွဲထွက်ရာသီ ခြေစွမ်းမပြသနိုင်မှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဆွမ်မယ်လာက ဆိုခဲ့သည်။
“အငှားနဲ့ သွားကစားတဲ့ အစီအစဉ်က သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့ပါ။ ဆီဗီလာက ယူရိုပါလိဂ်ကို နှစ်ကြိမ်ဆက် ရရှိခဲ့တဲ့အသင်းပါ။ သူတို့က ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ပါဝင်ကစားခွင့်ရထားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
Official Websites Of Football Clubs
Man-U News And Features
ဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဘာတိုမြူ...
ဟံသာဝတီအသင်း ၁၂ ပွဲဆက်နိုင် ပွဲပျောက်ဆုံးနေသည့် မှ...
ဗီယက်နမ် ယူ-၂၀ အမျိုးသမီးဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရန်ြ...
နောက်ခံလူ ဘယ်လာရင်ကို အာဆင်နယ်အသင်း ကာလရှည် စာချုပ...
ယိုကိုဟားမား အကယ်ဒမီ တက်ရောက်လိုသည့် လူငယ်များကို ...
နာပိုလီသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် အင်မိုဘိုင်း ဆန္ဒရှိခဲ့ေ...
ဝုဖ်ဘတ်တွင်သာ ဒီဘရွမ်း ဆက်နေသင့်ကြောင်း ဒီဇီကို အြ...
မထင်မှတ်ထားသည့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးကို ယူနိုက်တက်ေ...
အာဆင်နယ်တွင် အလွန်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြောင်း မွန်ရီရယ...
ချယ်ဆီးတွင် ပေါ့ဂ်ဘာကို မလိုအပ်ကြောင်း မော်ရင်ဟို ...
မန်စီးတီးတွင် နေရာရရန်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ရိ...
လစာ ကြွေးကျန် ကိစ္စဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နေပြည်တော် အသင...
ဗီယက်နမ် ဖိတ်ခေါ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ရန် က...
လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းသို့ မလာရောက်ရန် သီဟစည်သူကို ရတနာ...
မန်စီးတီးမှ ကြယ်ပွင့်များနှင့် တွဲဖက်ကစားရ၍ စတာလင်...
ဂျူဗင်းတပ်စ်သည် ရီးယဲလ်နှင့် အဆင့်တူ အသင်းမျိုးဟု ...
ဗီဒဲလ်၏ ပြောင်းရွှေ့ကြေးအတွက် ဘိုင်ယန်နှင့် ဂျူဗင်း...
ကာဆီလာအတွက် ရီးယဲလ်၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို တားဆီးရန် မလွယ...
ဘန်တက်ကီအတွက် စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်း ပေးချြေ...
ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နေ့ ထုတ် Euro Sports Journal Vol5N...
ဇူလိုင် ၁၆ ရက်နေ့ ထုတ် Sport View Journal
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့ကျင့်ရန် မြန်မာ ယူ-၁...
ဒုတိယအကျော့တွင် တန်းမဆင်းရရေး ဦးစားပေးကစားမည်ဟုေ...
ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ အမှတ်အသား မ...
စတာလင်အပြီး ဒီဘရုမ်းကို ခေါ်ယူနိုင်ရန် မန်စီးတီး အာ...
ထိပ်တန်းအဆင့် ကွင်းလယ်လူများကို ယူနိုက်တက် ခေါ်ယူလု...
လောရစ်၏ ဒဏ်ရာက စပါးအတွက် ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာ-
ဒဏ်ရာပြဿနာက မန်ယူကစားသမားဘ၀ကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ဟု...
စတုခ်စီးတီးဂိုးသမား ဘီဂိုဗစ်ကို ချယ်လ်ဆီးခေါ်ယူ-
ACတိုက်စစ်မှူး အယ်လ်ရှာရာဝီ မိုနာကိုသို့ ပြောင်းရေ...
မန်ယူသို့ပေါင် ၂၄ သန်းဖြင့်ပြောင်းရန် ရှနိုက်ဒါလင်...
ဗန်ပါစီကို ဖီနာဘာချီ ပရိသတ်အများအပြား လာရောက်ကြိုဆ...
ရီးယဲလ်ဂန္ထ၀င်ဂိုးသမား ကာဆီးလက်စ်ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ်...
ယူနိုက်တက် လူသစ် ဒါမီယန်သည် အီတလီ၏ အကောင်းဆုံး တော...
စတာလင်ကို သင့်တော်သည့် တန်ဖိုးဖြင့် လီဗာပူးလ် ရောင...
ဗီယက်နမ် ယူ-၂၁ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ ယူ-၂၀ ...
ချင်းယူနိုက်တက် ကို အနိုင် ကစားပြီး မကွေး ဗိုလ်ချု...
GFA ကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဒိုင်း ဒု...
မိမိ ကစားသမားတွေ အဆုံးသတ်ပိုင်းမှာ အာရုံ စူးစိုက်မ...
ယူနိုက်တက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ရှဝိန်းစတိုင်ဂါ သဘော...
အက်စ်တွန်ဗီလာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဖေဘီယန်ဒပ်ဖ် မန်စီး...
ဘောလုံး ရထားလျှင် ဟာဇက်ကို ပေးလိုက်ရန်သာ လိုအပ်ဟု ...
ကာဘာယီကို သုံးနှစ် စာချုပ်ဖြင့် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ် ခေါ်...
ဂျူဗင်တပ်စ်နောက်ခံလူ အော့ဘွန်နာကို ၀က်စ်ဟမ်း ခေါ်ယူ...
ဗန်ဂျင်ကယ်နှင့် ဂစ်ဗင်းတို့ကို စတုခ်စီးတီးအသင်းခေါ်...
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနှင့် မာဆယ်လို ၂ နှစ်သက်တမ်းတို...
ဆုဖလားတွေရယူဖို့ မန်ယူကိုလာခဲ့တာပါ ဆိုတဲ့ ဒီပေး
ဇူလိုင်လအတွက်ကမ္ဘာ့အဆင့် သတ်မှတ်ချက်တွင် မြန်မာအသင်...
ရတနာပုံ - ရန်ကုန်ပွဲ ဖြစ်ရပ်အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှု ...
အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရင့်ရင့်ကျက်ကျက် ကိုင်တွယ် ...
ဘာစီလိုနာသို့ ပြောင်းရွှေ့မှုသည် ကစားသမား ဘဝ ကြီးမား...
စီးရီးအေတွင် လာရောက် ကစားသင့်ဟု ဂျက်ကိုကို ယန်ဂါ အ...
အာရှခြေစမ်းခရီးစဉ်ကို ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ဝဲလ်ဘတ်လွဲခေ...
မြန်မာကစားသမားနှစ်ဦးကို ထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ် သို့...
အန်ဇွန်ဇီကို ဆီဗီလာသို့ပေါင် ၇ သန်းဖြင့် စတုခ်စီးတ...
အနားမယူခင်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တွင် ကစားလိုသည်ဟု အီဘရာဟီ...
မန်ယူတိုက်စစ်မှူး ဟာနန်ဒက်ဇ်ကို ဆီဗီလာစုံစမ်းနေ
လက်ရွေးစင်နည်းပြချုပ်အေဗရာမိုဗစ်ကို (၁၇) လ သက်တမ်း...
ရီးယဲလ်မှ အငှားထွက်ခွာဖွယ်ရှိဟု လူးကက်စ်ဆေးလ်ဗား ဝ...
ဈေးကွက်ထဲတွင် မန်စီးတီး တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားမည်ဟ...
ဗီဒယ်အတွက် ရီးယဲမက်ဒရစ်၏ တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှု မရရှိ...
ပေါ်တိုသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် ကားဆီးလက်စ် ဆန္ဒရှိနေဟု ၎င်း...
လီဗာပူးလ်၏ ရာသီကြို ခြေစမ်းခရီးစဉ်တွင် မလိုက်ပါလို...
ဒါမီယန်အတွက် ဈေးနှုန်း ယူနိုက်တက် သဘောတူညီမှု ရရှိထ...
အက်သလက်တီကိုမှ အငှားခေါ်ယူထားသည့် မန်ကွီလို၏ စာချုပ...
ဒီဂီယာကို ခေါ်ယူမည့် သတင်းကြောင့် စိုးရိမ် ပူပန်ခြင...
ငြိမ်းချမ်းအောင် ဒူးဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်မှုအောင်မြင်သည်ဟု ...
ရတနာပုံ FC အသင်းနှင့် မနောမြေ အသင်းတို့ ခြေစမ်းပွဲ...
အာဂျင်တီးနားအသင်းနှင့်အတူ အဓိကဆုဖလား လွဲချော်ခဲ့ရြ...
ချာလီအော်စတင်အတွက် ပေါင် ၁၂ သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုက...
ချယ်ဆီးတွင် အရန်ခုံ၌သာ ဖယ်ကာအို အချိန်ကုန်ဆုံးရလိမ...
အာဒါတူရန်ကို ခေါ်ယူရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဘာတိုမြူ အတည...
ကာဘာယီကို ခေါ်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း ခရစ္စတယ်ပဲလေ့...
ရန်ကုန်ဘောလုံး အကယ်ဒမီအတွက် နည်းပြများကို ဖီဖာမှစေ...
ကမ္ဘာ့လိဂ်ပြိုင်ပွဲများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် မြန်မာ...
မွန်ဘိုင်းစီးတီး ကစားသမား-နည်းပြအဖြစ် အနယ်ကာတာဝန်ေ...
အက်ဒရီယာနိုနှင့် ဘက်ကာကို အေစီမီလန် အသင်းတစ်ပြိုင်...
မက်ဆီကို ရပ်တန့်နိုင်ရန် PlayStation ဂိမ်းမှ နည်းစ...
ဘာစီလိုနာနောက်ခံလူ မွန်တိုယာကို အင်တာမီလန် အငှားဖြ...
လစာငွေလျှော့ယူပြီး ချယ်လ်ဆီးသို့ ဖယ်လ်ကာအို ပြောင်...
ကွန်ဒေါ့ဘီယားသည် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားတစ်ယောက်...
နာနီကို ပေါင် ၄.၂၅ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူရန် ဖီနာဘာချီ သေ...
မိမိ၏ အဓိကတာဝန်မှာ မက်ဆီနှင့် ဒီမာရီယာ ခြေစွမ်းပြန...
ရီးယဲလ်သို့ ဒီဂီယာ ပြောင်းရွှေ့ပါက အက်သလက်တီကိုပရိသ...
ယူနိုက်တက် တစ်ကျော့ပြန် အောင်မြင်လာအောင် ဗန်ဂါးလ် ...
ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံဆုအတွက် ချယ်လ်ဆီးသာ ရေပန်းအ...
ဘန်တီကီကို ခေါ်ယူရန် ရော်ဂျာကို ဖောင်လာ တိုက်တွန်း
ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့ ထုတ် Ain Arr Journal
ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့ ထုတ် Euro Sports Journal
မဲခေါင်-ဂျပန် ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ယူ-၁၅ အသ...
ယူ-၂၀ ကစားသမားအချို့ ကလပ်အသင်းများတွင် ပွဲထွက်ခွင်...
ဟံသာဝတီအသင်း ဆီဗာဂျီကို ပြန်လည်ခေါ်ယူမည့် အစီအစဉ် ပ...
ကိုနိုပလိုင်ယန်ကာကိုခေါ်ရန် ဆီဗီလာအသင်း သဘောတူညီမှုရ...
ညှပ်ရိုးကျိုးသည့်ဒဏ်ရာကြောင့် ရွှေဖလားပြိုင်ပွဲကို ...
ချယ်လ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ပက်ဆာလစ် မိုနာကိုသို့ အငှားဖြ...
Copyright (c) 2011 ဘောလုံးအားကစား သတင်းများ. Design by Soccer Blogger - Distributed by: best free blogger template 2011 best blogger templates of 2012 | cheapest vpn server cheap vpn client